Iindaba -Ungazikhetha njani ubucwebe kwintlanganiso yonyaka?
Xa uMnyhadala weNtwasahlobo usiza, yintoni eza kuthunyelwa kwi-TA ukumenza onwabe ade ancume emehlweni akhe? I-Lingling ikuxelela ukuba ubucwebe belitye elaneleyo. Intsingiselo yobucwebe obahlukeneyo imele amagama ahlukeneyo othando ayimfihlo. Ngaba unokwazi ukuba i-TA inokuqikelela ngokuchanekileyo?
Yeyiphi intombazana engakuthandiyo ukuthandana? Kanye ngexesha elifanelekileyo, mthumele isacholo esikhethwe ngononophelo. Ukongeza kwi-homophonic "ukuthandana," isacholo somqala sinolunye uluhlu lothando, "Ndifuna ukubopha intliziyo yakho ngokuqinileyo ngentsimbi yomqala kwaye ungathathwa ngabanye abantu." Isibhengezo esinjalo esibuthathaka nesilawulayo ngokuqinisekileyo siya kuyenza ibe mnandi intliziyo yakhe.
I-Crystal pink powder powder emnandi kwaye engenamafutha, njengobuhlobo obumnandi phakathi kwezi zimbini, kukho intyatyambo entle exhomekeke kwintyatyambo, i-crystal Jade le mosaic jade necklace series ilungele kakhulu intombi.
Isongo - uMgcini
Ngawaphi amantombazana angafuni ukuba nothando oluhlala ixesha elide? Mhlawumbi indawo akuyo entliziyweni yakho ayinakuphikiswa, kwaye iimvakalelo zakho zinobuzaza nenkathalo. Nangona kunjalo, kufuneka uziveze, umazise, ​​kwaye umenze azive ekhululekile. Thumela isongo, esithetha "ukugcina uthando," evakalisa umnqweno wakhe wokumbopha ubomi bakhe bonke nokuchitha ubomi bakhe bonke.
Kungcono ukumthumelela isongo sekristale iamethiste, iamethiste “ilitye lomgcini lothando”, oko kuthetha ukuba ulungile, uyilo olulula kwaye lubhetyebhetye, ke umhle kwaye uyathandeka.
Amakhonkco - Umsesane wothando
Yeyiphi intombazana engafuniyo ukuzibophelela ebomini? Ukuba ingoyena mntu ufuna "ukugcina umnwe wakho kuwo, gcina indala," ungamvumeli alinde ixesha elide, umfakele umsesane, kwaye uvakalise elona lizwi lakhe linyanisekileyo nelinyanisekileyo elithi "mthande. Ngentliziyo yam, ndingavuma ukuncama uthando lwakhe, ”ndimnike umtshato owonwabisayo.
Nxiba umsesane omile okwekristale Ruby, apho niya kuvuma khona uthando kunye nokuzinikela komnye nomnye.
Umnyhadala, mthumele ubucwebe bamatye e-crystal
Izipho zihle kwaye zinentsingiselo
Yintoni efanelekileyo ngakumbi kunale?
Ixesha Post: Jun-20-2018